दिव्य धर्म सभाको तयारी गरेका श्रीनिवास प्रशासनसँग किन सशंकित छन् ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
दिव्य धर्म सभाको तयारी गरेका श्रीनिवास प्रशासनसँग किन सशंकित छन् ?
काठमाडौं । सनातन युवा मञ्च नेपालले ६ जेठमा सुनसरीको इटहरीमा गर्न लागेको दिव्य धर्मसभा अघि प्रशासनले विथोल्नका लागि आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्यको आशंका छ । सनातन हिन्दु धर्म मास्दै क्रिश्चियानीटिको प्रचार भइरहेको भन्दै उक्त सभा आचार्यकै अगुवाईमा हुन लागेको हो । उनीविरुद्धको मुद्दा अझै कायम रहेका कारण त्यसैलाई कारण बनाएर प्रशासनले सो धर्मसभा विथोल्न सक्ने उनको आशंका हो ।
एक वर्षअघि धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने नियतले आफैंलाई गोली हान्न लगाएको अभियोगमा पक्राउ परेका उनी सहयोगीको बयानका कारण हिरासतमा पुगेका थिए । ‘श्रीनिवासकै योजनामा गोली हानेका हौं’ भनेर बयान दिनेहरुले बयान फेरेपछि श्रीनिवास एक अभियोगबाट उम्के । अवैध हतियारसम्बन्धी मुद्दा भने जिल्ला अदालत मोरङमा अझै छ । यसै कारण पनि पक्राउ गरी प्रशासनले धर्मसभा रोक्न सक्ने उनको चिन्ता हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको एक फौजदारी मुद्दाको अभिलेखमा दिनेशप्रसाद पण्डित अर्थात् श्रीनिवासाचार्य नाम अहिले पनि छ । उनको स्थायी घर हो, बारा जिल्लाको सिमरा जीतपुर वडा नम्बर– ३ । उनीविरुद्धको अभियोग छ– ज्यान मार्ने उद्योग र अवैध हातहतियार र खरखजना ।
प्रहरीको पछिल्लो अभिलेखमा उनी जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा १६ जेठ २०७५ मा पुर्पक्षका लागि विराटनगर कारागार चलान भएका देखिन्छ ।
दिनेशप्रसाद पण्डित अहिले स्वतन्त्र रूपमा हिन्दु राज्यको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । फौजदारी अभियुक्त दिनेशप्रसाद पण्डित उर्फ युवा सन्त श्रीनिवासचार्यले एक मुद्दामा सफाइ पाए पनि उनीविरुद्धको अर्को मुद्दा कायमै रहेका कारण चिन्तित बनेका हुन् ।
उनले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरे ‘धर्मिक सभा अहिंसात्मक र शान्तिवादी रहने’ भनेका थिए । विराटनगरको जतुवास्थित रामजनकी मन्दिरमा धार्मिक प्रवचन गर्न पुगेका श्रीनिवासचार्यमाथि २५ चैत, २०७४ मा राती २ बजे छातीको दाहिने भागमा बन्दुकको गोली हानिएको थियो ।
उपचारका क्रममा न्युरो अस्पतालमा उनलाई भेट्नका लागि पूर्वयुवराज पारस शाह, अभिनेत्री मनिषा कोइराला, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसहित पुगेका थिए ।
श्रीनिवासाचार्यका सहयोगीहरू नवलपरासी गैँडाकोट घर भएका खान र सन्तोष भनिने लक्ष्मीराज अधिकारी, चितवन भरतपुर घर भएका काले रोशन भनिने माधव चौधरी, सुनसरी धरान घर भएका माता पद्मश्री भनिने सनम ढुङ्गाना र सिन्धुपाल्चोक घर भएका चिरणप्रताप थापालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भएको थियो । उनीहरूकै बयानका आधारमा आचार्य आफैं फँसेका थिए ।
आज तमु ल्होछार मनाइदै
पुस १५ ।काठमाडौँ, बौद्धधर्मअन्तर्गत महायान् सम्प्रदायको सांस्कृतिक पर्व तमु ल्होछार आज काठमाडौंँ […]
लेस्टरले ट्रफी चुम्यो
2) Binita Sedhain__EDITED लण्डन ।घरेलु मैदानमा शनिबार राती एभर्टनलाई ३–१ ले पराजित गर्दै लेस्टर सिटिले […]
मधेसवादी दलका नेताहरूले बाढी पश्चात तरार्इमा पाइला टेकेका छैनन्
भदौ २, काठमाडौं । तराईका बाढी र डुबानले प्रभावित क्षेत्रहरूमा विभिन्न संघ संस्था, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर […]
काठमाडौं । अर्ध सैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बल आगामी साउनदेखि नयाँ संरचनामा परिवर्तन हुने भएको छ । […]
वडा सदस्य विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ
भदाै २५ । रेसुंगा नगरपालिकाका वडा सदस्य ताराबहादुर श्रीस विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले […]
पर्यटकका लागि नेपाल सुरक्षित
काठमाडौँ, भ्रमणका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको युरोपेली मुलुकका पत्रकार एवम् पत्रयात्रा र भ्रमण व्यवसायीटुर […]